Izao dia niresaka tamin’ny iray amin’ny mpianany tao Damaskosy i Jesosy, nanao hoe: ‘Mitsangàna, ry Ananiasy. Mandehana any amin’ny lalana atao hoe Imahitsy. Tadiavo ny lehilahy atao hoe Saoly ao an-tranon’i Jodasy. Efa nifidy azy ho mpanompoko manokana aho.’
Nampiasaina tamin’ny fomba nahery i Saoly mba hitory amin’ny olona avy amin’ny firenena maro. Nanjary fantatra ho ny apostoly Paoly izy, ary hianatra zavatra betsaka momba azy isika. Nefa, aoka aloha hojerentsika izay nanirahan’Andriamanitra an’i Petera mba hatao.
Hizara Hizara Teny An-dalana ho any Damaskosy
my tant. 108